Shrink Fittting Icandelo lokuSusa isicelo kunye nokuFudumeza ukuFaka
Le yinkqubo yokuSusa inxenye yeShrinkfit. Inkqubo yangoku yomthengi isebenzisa umshini wokucinezela inxenye efakiweyo. Nangona kunjalo, oku kufuna amandla kunye nexesha. Ngokusebenzisa ubushushu, indlu inokwandisa nje ngokwaneleyo ukuvumela ukususwa ngokulula kwenxalenye efakiweyo ngamandla amancinci. Imfuno yomthengi yokugcwalisa iCandelo le-Shrinkfit ukuSusa ngaphakathi kwe-7 imizuzu.
Umatshini wokufudumeza we-DW-HF-15kw
• Ukulungiswa kwempompo yeAluminiyam Icandelo OD 2.885 ”(73.279mm), udonga 0.021” (.533mm)
Ubushushu: Malunga ne400 ° F (204 ° C)
Amandla: 4 kW
Ixesha: imizuzwana ye-100
Ukugqibezela ukuSusa iSahlulo seShrinkfit, beka inxenye kwikhoyili, ngoko ke phezulu kwendlu kusondele kakhulu kumphezulu wekhoyili.
Olunye uvavanyo lwalufuneka ukumisela ixesha elifanelekileyo kunye namandla. Sifumanise ukuba imizuzwana ye-100 yayilungele ukususwa kwenxalenye, eyayisezantsi kakhulu kunomda womthengi wemizuzu ye-7
Indibano yovavanyo ingashushuzwa kwiqondo lokushisa elifunekayo kwimizuzu engaphantsi kwesixhenxe kusetyenziswa inkqubo yokufudumeza ye-DW-HF-7kw kunye ne-coil eyenziweyo yesiko. Ixesha lokufudumeza i-Coil yeCustom yayiyimizuzwana eli-15, amaqondo obushushu kwakufuneka esondele kuma-100 ° F (400 ° C) ukuze andise inxalenye ngokwaneleyo ukuze isuswe. Inxalenye isuswe ngamandla athile okutsala isetyenzisiwe kuyo njengoko izindlu zempompo zazifikelela kuma-204 ° F (400 ° C).
Esi sicelo seShrink Fit saphinda sajongwa kwakhona ukujonga ukuba kusetyenziswa inkqubo yokufudumeza yamandla esezantsi. Kule meko, imfuno yomthengi yayiyimizuzu eyi-7, kwaye safumana ukususwa kwenxalenye kwimizuzwana eyi-100. Ngaba inkqubo yamandla esezantsi ingasusa icandelo ngendleko eziphantsi? Inkqubo yamandla asezantsi ingamkeleka ukuba injongo yethu yinxalenye yokufakelwa. NgeShrink Fit-Ukufakelwa kweCandelo, ukuthoba kancinci ukufudumeza kunokukhokelela kwinkqubo ephumelelayo. Nangona kunjalo, nge-Shrink Fit-UkuSuswa kweCandelo, kubalulekile ukuba ubushushu ngokukhawuleza. Umgangatho wobushushu ocothayo ungakhokelela ekungeneni nasekufakweni, nasekukhupheni. Inxalenye efakiweyo inokuthi ihlale "inamathele". Ngokushisa ngokukhawuleza, siyawuphepha lo mbandela. Umthengi kule meko ugqibe kwelokuba bobabini basebenzise inkqubo yokufakelwa kwenxalenye kunye nokususwa kwenxalenye. Inkqubo ye-4 kW ilungile kwi-Shrink Fit - Icandelo lokuFakelwa; kwaye isixhobo se-7 kW DW-HF-15kw sokufudumeza inkqubo siya kusetyenziselwa Shrink Fit-Inxalenye yokuSusa indawo
Amandla kwimfuno ngemijikelezo eshushu yobushushu
Inkqubo ephindwayo, ayixhomekeki kumqhubi
Ukufudumeza okukhuselekileyo ngaphandle kwamadangatye
Ukufudumeza ngokufanelekileyo amandla
iindidi Teknoloji tags ukufudumeza ukufudumeza kunciphisa ukususwa, ukuchithwa kokunciphisa ukufaneleka, Inkqubo yokungena encinci efanelekileyo, ukuhlehlisa, nciphisa ukufudumeza, ukuhlehlisa, ukuncipha kwenxalenye yokususa Post yokukhangela
inkqubo ephezulu yokuqhelisa ukuqinisa inkqubo ye-camshafts
ukuqalisa ukuthengiswa kwebhubhu yobhedu kwiivalve zobhedu